Iwo akanakisa distros emambure ebhuku | Kubva kuLinux
Iwo akanakisa distros emanetbook
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | FileLet's UseLinux, Kugoverwa
Kusiyana neWindows kana Mac, Linux ine dzakasiyana siyana dzekuparadzira dzinoshandisa dzakasiyana graphical nharaunda uye zvinoshandiswa nekutadza. Izvi zvinosanganisa zvinoita kuti mamwe ma "distros" areruke kupfuura mamwe kana kuti mamwe acho ari nani kuchinjiswa kune chimwe chiitiko kana imwe mhando yehardware, senge mabhuku emambure. Rondedzero yatinogovera pazasi haina kuitirwa kuti iganhare; kune zvimwe zvakawanda zvekugovera zvinogona kushanda zvakakwana pane netbook. Isu tinongokukurudzira kuti utaure iwo ayo, mumaonero edu, ari akanakisa kana ayo akanyatsogadzirirwa kuti ashandiswe pamabhuku.
1 Hunhu hukuru hwe netbook
2 Hunhu hweyakanaka netbook distro
Hunhu hukuru hwe netbook
Iko kusimbiswa kuri pakusununguka kwekutakurika (inorema zvishoma uye kazhinji ine hupenyu hwakareba hwebhatiri).
Nekuti iro simba ndiko 'kufamba' kwayo, inovimba zvakanyanya neisina waya kubatana (wifi, bluetooth, nezvimwewo)
Iyo ine ine mwero zviyero huwandu hwe RAM, kazhinji 1GB / 2GB.
Iyo ine skrini diki.
Hunhu hweyakanaka netbook distro
Hunhu hunotsanangurwa pamusoro apa hunoita kuti kudikanwa kwekuparadzirwa kweGNU / Linux kwesarudzo yedu kuve nemapoinzi "akasimba" anotevera:
Izvo hazvipedze bhatiri rakawanda uye, kana zvichibvira, kuti inoshandisa iyo hombe nhamba yesimba rekuchengetedza magetsi.
Kuti hapana matambudziko nekuonekwa kwewifi kana bluetooth.
Izvo zvinodya zvishoma RAM.
Kuti ine "yakasununguka" interface uye kuti inokodzera saizi screen (diki) iyo yatinowanzowana pane netbook.
Jolicloud yakavakirwa paUbuntu, asi iyo yakagadzirirwa kushanda pamakomputa ane mashoma mashoma marondedzero maererano nedisk dhizaini, ndangariro, uye saizi saizi. Iyo inoonekwa interface (HTML 5 + GNOME) yakafanana neyepiritsi uye inomira nekumhanya kwayo uye kushomeka kwekushandisa zviwanikwa. Sezvinoonekwa mune iyo skrini, JoliOS inonyanya kutarisirwa kumhanyisa webhu (ChromeOS maitiro), iyo yainoshandisa Mozilla Prism. Chero zvazvingaitika, zvinokwanisika kuisa zvemuno zvinoshandiswa, senge VLC vhidhiyo inoridza, uye kunyangwe zvisingatauri kuti iyi distro inosvina muto wese kana isu takabatana neInternet, zvinokwanisika kuishandisa kure- mutsara.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvinokwanisika kuisa JoliOS mukati meWindows kana Ubuntu (beta) sekunge yaingova imwe application, inova yakanaka kune avo vanoda kuyedza vasati vazopedzisira vaiisa.
Iyo Ubuntu based distro inoshandisa iyo LXDE desktop nharaunda. Iyo inomira kunze kwayo yakaderera kwazvo zviwanikwa zvekushandisa uye nekufananidzwa kweayo anoonekwa interface kune iyo yazvino yakasarudzika WinXP, iyo inoita kuti ive inokwezva kune avo vari kutora matanho avo ekutanga muGNU / Linux.
Kunyange ese maLXDE-based distros achikurudzirwa zvakanyanya pamabhuku, Lubuntu hapana mubvunzo kuti ndiye akanakisa kune vatsva, kwete chete nekuda kwekufanana kwechimiro chayo chekuona neicho cheWinXP, sezvatatoona, asi zvakare nekuti inogovera iyo yakafanana yakakura Ubuntu munharaunda, zvichiita kuti zvive nyore kugadzirisa chero dambudziko rekupedzisira rinogona kumuka.
Iko kugoverwa kweGNU / Linux iyo inotora mukana weiyo izere kugona kweiyo Chiedza hwindo maneja. Kutaura zvazviri, ndeimwe yemapapiro mashoma anoshandiswa neChiedza. Iyo inouya, nekutadza, iine mashoma seti ekushandisa senge browser, chinyorwa chinyorwa, chishandiso manejimendi manejimendi, nezvimwe.
Chaizvoizvo, minimalism ndeimwe yemafungiro kumashure kweBodhi Linux, ndosaka isina kukurudzirwa kune vatsva, kunyange ichikurudzirwa kune avo vane ruzivo muLinux. Chinhu chinonyanya kukwezva pamusoro peiyi distro ndeyekumhanya kwayo kwakasarudzika uye yakanyanya kuderera sisitimu inodikanwa, uku ichipa inonakidza kwazvo, nyore kushandisa uye inogadziridzwa desktop desktop.
Dhawunirodha Bodhi Linux
Iyo yakavakirwa paDebian uye inoshandisa iyo Openbox hwindo maneja. Iyi dhizaini yakagadzirirwa kupa yakanakisa chiyero pakati pekumhanya uye mashandiro. Iyo yakagadzikana seDebian pachayo, pamusoro pekusanganisira neyakagadzika minimalist uye yemazuva ano interface iyo inogona kuve nyore kugadziriswa, ichiita kuti ive yakakwana kune zvikwata zvine mashoma zviwanikwa.
Ini handisi kuwedzeredza kutaura kuti ndeimwe yeakanakisa ekugoverwa kweGNU / Linux inowanikwa panguva ino.
Iyo distro yakavakirwa paPuppy Linux asi inoshandisa Ubuntu mapakeji. Iyo ine inoshamwaridzika desktop desktop uye iine mamwe maitiro ayo anoipa iyo chitarisiko (kunyange ichiri kure kure) yeMac OS X.
Macpup inouya nenhamba isina kurerukirwa yemahara kunyorera nekumisikidza, senge AbiWord, Gnumeric, SeaMonkey, uye Opera. Windo rewindows rinoshandiswa iri, zvakare zvakare, Kujekerwa, iyo inomira kunze kwayo yakanaka graphical performance ine mashoma system zviwanikwa.
Iko kugoverwa kweGNU / Linux kunoenderana neArch Linux, kugovera kunokurudzirwa kunyanya kune vashandisi vemberi, asi iine yayo seti yezvinyorwa. Kugovera kunovavarira kuve mushandisi-unoshamwaridzika uchichengetedza maArch maficha, senge Pacman package maneja uye AUR (Arch User's Repository) kuenderana. Kunze kweiyo huru vhezheni ine XFCE pane yepamutemo vhezheni (yakareruka) iyo inoshandisa iyo OpenBox hwindo maneja. Kune zvekare enharaunda edhisheni inoshandisa E17, MATE, LXDE, Cinnamon / Gnome-shell, uye KDE / Razor-qt.
Manjaro inomira kuve nyore uye nekumhanyisa, ichiisa simba reArch Linux mukati mekusvikwa ne "wepakati / wepamberi" mushandisi.
Iyo "gore-yakavakirwa" inoshanda sisitimu iyo inouya neyakanaka assortment yewebhu kunyorera nekutadza. Iyo yakavakirwa paLubuntu uye inoshandisa iyo LXDE desktop nharaunda.
Kusiyana nekumwe kugoverwa kwe "web-centric", senge ChromeOS kana JoliOS, Peppermint ine hushamwari inoshamwaridzika kune avo vanobva kuWindows uye vanosarudza iyo yakasarudzika "Start" menyu.
Chaizvoizvo Zorin OS inoitwa kutevedzera kutaridzika kwemamwe masisitimu anoshanda. Unogona kusarudza Windows 2000 kana Mac OS X. Kune vashandisi veWindows iyi distro inopa kutaridzika kunozivikanwa. Uye zvakare, zviri nyore kwazvo kushandisa, kunyangwe ichiuya nemaapplication mashoma akaisirwa default.
SolydX (XFCE) iri semi-rolling kuburitswa kunoenderana naDebian. Chinangwa chayo ndechekuti ive nyore kushandisa, ichipa yakatsiga uye yakachengeteka nharaunda. Iyo yakakurudzirwa vhezheni yenetbook inoshandisa XFCE seye desktop desktop, kunyangwe ichiyeuchidza nezve KDE. SolydX inoshandisa iyo wicd network maneja yeInternet yekubatanidza uye inouya ne flash uye MP3 codecs akaisirwa nekutadza. Uye zvakare, inosanganisira akasiyana akasiyana ehuremu mafomu: Firefox, Exaile, VLC, Abiword uye Gnumeric.
A "web-centric" inoshanda sisitimu, yakavakirwa pabhurawuza rine zita rimwe chete uye Linux. Iyo ndiyo sisitimu inoshandiswa mune inowedzera kufarirwa maCbookbook.
Imwe yemapoinzi anonyanya kumira paGoogle kumhanya kwesisitimu, iine bhuti nguva yemasekondi masere uye inguva pfupi yekudzima, kuwedzera kune kumhanya kwainovhura maapplication ayo ewebhu. Zvese zvinyorwa, kunyorera, kuwedzeredza, uye kumisikidza zvinotsigirwa online pasi pegore komputa pfungwa. Saka kana mushandisi akarasikirwa nemuchina wake, anokwanisa kuwana imwe kana kuwana kubva kune mumwe muchina, uye otora zvakangofanana data raakambochengeta
Sezvatinoona munyika yemahara software pane zvakawanda zvingasarudzwa zve netbook. Inofanira kujekeswa kuti migove yakataurwa pano haina kuiswa muhurongwa hwezvido. Muchokwadi, mugove wakanakisa uchave unonyatsokodzera zvido zveumwe neumwe uye izvo zviri pachena zvinosiyana. Kazhinji kutaura, ini ndinokurudzira "newbies" kuyedza Lubuntu, Crunchbang kana MacPup, nepo ivo "vepamberi" vachiedza Manjaro kana SolydX.
Chekupedzisira, ndingafarire vese vashandisi veaya ma distros avo vangatitumire makomenti avo kuti kupinda uku kuve kwakapfuma uye kunobatsira kune avo vane netbook uye vari kufunga kuchinja iyo Inoshanda Sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Iwo akanakisa distros emanetbook
Ini ndakaisa debian pane yangu netbook. Ini ndakakanganwa zvachose kunyange kuyedza Chrome OS> - <haha
Leon Jl akadaro
uye ndeapi eaya ma distros aunokurudzira kuti Compaq Presario itsva kune izvi uye kana ndichida kuchinjira ku linux
Pindura kuna Leon Jl
Mhoroi, edza uye edza Manjaro kana Lubuntu.
Pindura kune teenwood8
Ndiine 64-bit Manjaro XFCE (yangu laptop ine 6GB ye RAM) iyo laptop inopisa zvakanyanya, ndakaedza kumhanyisa iyo Dota 2 uye yakapisa zvekuti yakapedzisira yavhara.
panxo mukati akadaro
Zvinogona kunge zvichikonzerwa nematambudziko ehurdware, haifanirwe kunge ichipisa zvakanyanya kunze kwekunge iwe uchiisa kuyedza kwakawanda mu processor, izvo zvandisingafunge. Edza linuxmint xfce 64 bit. Izvo ndizvo zvandinoshandisa uye zvinokodzera ini zvakakwana. Muchiitiko chekuenderera mberi nekupisa, ini ndinokurudzira kuti uchenese pc yako uye uchinje iyo yekupisa pisa. Kwaziso uye rombo rakanaka!
Pindura panxo, en
refu uye ichimonyoroka nzira iyo inotsvaga kugoverwa kwakakodzera. Ndakaedza kanokwana gumi distros uye iyo laptop kupisa kuri kutyisa. harisi dambudziko rehardware, idambudziko re linux, uye dambudziko rinozivikanwa. Ndakaedza ubuntu, lubuntu, xubuntu, kubuntu, debian mate, debian kde, debian xfce, crunchbang (bunsen), crunchbang ++, linuxmint kde, linuxmint mate (iyo yekupedzisira ndiyo inopisa zvishoma, asi zvakadaro haina donha pazasi pe10). neiyo chete distro isingatsve ine kali, asi kali ini handidi kali senzvimbo huru yedistro, ndinoda chimwe chinhu chakasununguka uye chisina hasha. Ndiri kuenda kuedza solydx kuti ndione kuti ndiri sei
Luis Miguel Mora akadaro
Pane chero Ubuntu-based distro yekuisa cpufreq uye woiisa kuPowerSave modhi, nenzira iyoyo ichaita kuti processor ishandise yakaderera uye isingazopisa (zvakare isa psensor kuti uone kupisa kwako)
Pindura Luis Miguel Mora
Ndeipi linux inoshanda sisitimu iwe yaungakurudzira kune iyo acer aspire, kwete iyo netbook. Ndiri kuda kuti ikurumidze kuita nekuti kutaura chokwadi zvinomhanya zvishoma
Gustavo Ramirez placeholder mufananidzo akadaro
Ndakaedza 3 distros yeiyo HP Mini 110 ine 10.1 inch screen.
Chinhu chega chandaida ndechekuti vatyairi vasina waya vashande vasina chavanoita, nemadhiraivha asina waya anoshanda unogona kugadzirisa chero chinhu, handiti? 😉
Crunchbang: Changu chandinodisisa kubvira pandakachiedza, zvichibva paDebian chakanyanya kupenya, iri minimalist interface, saka usatarisira ese "eye-candy" kubva kune mamwe ma distros, kune netbook zvakanaka kwazvo zvakaipa chinhu ndechekuti zvinodhura zvishoma ini ndinoshanda kuzvimisa, zvingangoita zvese zvigadziriso zvinofanirwa kuitwa mumafaira ekugadzirisa, chinhu chakanaka ndechekuti inounza maruneti eaya mune menyu. Chinhu chakashata ndechekuti isina waya haina kushanda kekutanga. Kubatsira kweizvi ndekwekuti kana iwe uchikwanisa kuibatanidza kuburikidza neethernet tambo, unogona kuisa zvese pasina dambudziko, inounza script yekutanga iyo inotakura mapurogiramu azvino uye madhiraivha, e multimedia, nezvimwe.
EasyPeasy: Kugoverwa uku kunofanirwa kuve kwakakosha pamabhuku, ini ndakariisa, uye rinotaridzika serakanaka, handina kuripa nguva yakawanda kuti ndiedze sezvo yangu waya isina kushanda kekutanga.
OpenSUSE 12.1 (Gnome): Iyi distro ndiyo yandaisa, mutyairi asina waya akashanda pasina kuita chero chinhu kwairi, ini ndakaisa Chrome uye multimedia codec uye inoshanda pasina dambudziko.
Sezvawataura, iyi netbook inonyanya kuitisa yekutarisa internet, tsamba, LibreOffice, nezvimwe. uye ne OpenSUSE inoshanda kwandiri. Pamusoro pazvose, GNOME 3 yakanaka, ndinoifarira kupfuura 2
Pindura Gustavo Ramirez
Ini ndanga ndichiri kutsvaga chinhu chimwe chete ichocho, ndakaedza Lubuntu, Elementary OS Luna uye beta 1 na2 yeFreya uye Deepin Linux. Iyo yega distro iyo yakatanga kuona iyo wi-fi kadhi yaive Deepin Linux, asi pane dzimwe nguva payakanonoka zvishoma. Mukutanga OS iwe unofanirwa kuimisikidza nekuti kuve mutyairi wekutengesa haina kuiisa otomatiki, Lubuntu inyaya yakasarudzika uye unofanirwa kushanda zvakanyanya kuisa mutyairi !!!
vakomana ... netbook nebhuku rekunyorera ... ivo vakasiyana ... usakanganisa ... kabhuku kadiki ... uye nekudaro havazi vese ma distros anoenderana nechiratidziro che approx 11 inches ... semuenzaniso. .. ne ubuntu 12.04 ... zvese zvakanaka .. asi kana hwindo rikavhurwa sarudzo senge sekuchinja Wallpaper kana imwe ... chikamu chepazasi chehwindo chakavanzwa uye mamwe mabhatani akadai sekugamuchira kana kukanzura (zvinoenderana pane iyo kesi) haigone kudzvanywa ... uye mumasikirini sarudzo imwe chete sarudzo inowoneka ... pasina mukana wekuchinja ... ndakayedza nekabhuku msi, hp uye acer ... uye nezvayo zvese zvitatu zvakafanana ... uye ps kana iwe uchiziva chero chinowirirana neinotarisa chinyorwa chindiudze. usave magach ... kwaziso ..
iyo pixie akadaro
Netbook ikomputa diki ine ingangoita gumi inches yechidzitiro
A notibhuku yakajairika laptop iri hombe.
xubuntu uye lubuntu zvingave zvakakunakira iwe. Ndanga ndichishandisa xubuntu 14.04 uye zvakanaka ne1 gig yemakondohwe ine asus neetbook kubva pamakore masere apfuura. Kwazisai Jorge
Pindura kuna lamberto
Uye zvakadii nezve xpud? Inokurumidza uye yakati siyanei uye zvinotora zvishoma kuchinjika, kunyanya kune avo vakashandiswa kudesktop.
Kwete zvakawanda zvinogona kuitwa, asi kufamba, kumisikidza musangano wevhidhiyo uchishandisa Skype uye kushanda neOpen Office kwakwana.
Kunyanya kana yangu Acer's SSD yarega kushanda.
Pindura kuna Angelsaracho
Juan Barra akadaro
Izvo zvaizodikanwa kutaura ututo atom yerudzi irworwo rwe processor 🙂
Pindura Juan Barra
Ruzivo rwako runoratidzira kwazvo. Ndatenda
Ndine dambudziko nelaptop yangu, ndakaisa UBUNTU 11.10, sechikumbiro asi zvinoitika kuti nekutangazve uye kupinda mufeni iri kushanda nguva dzese, zvichikonzera kuti PC yangu inyanye kupisa, ndinoshuvira kuziva kana izvo zvoitika idzi dzakaratidzwa distros pano.
Raimundo riquelme akadaro
Ndine Ubuntu 12.04 pane yangu Samsung netbook uye ndinofara kwazvo! Kunyangwe zvisina kushata kuziva dzimwe nzira 🙂 Kwaziso
Pindura Raimundo Riquelme
Ricardo C. Lucero akadaro
Ndine Samsung N150 Plus netbook kwandakaedza Ubuntu 12.04 naJoly. Vane gumi! Iye zvino ndine Mandriva 12 yakaiswa uye ndinoifarira zvakanyanya… ndinoishandisa ne KDE desktop !!!
Pindura Ricardo C. Lucero
Daniel Rossell akadaro
Kuki Linux haiwanikwe pane yepamutemo peji, uye kunyangwe hazvo ndapa yakawanda sei, ini handina kuwana zvinongedzo zvekurodha pasi. Ndine chishuvo chimwe uye ndinoda chaizvo kuedza kugovera. Pane chero munhu anoziva kwandingaite kurodhaunira?
Pindura kuna Daniel Rossell
ElementaryOS ingangowira mukati meakakurudzirwa here?
yekutanga OS iri gumi! Ini ndinoshandisa iyo yangu hombe OS
Ivo vanofanirwa kuona mafambiro ari kuita ISIS, vanodonhedza mate pavanoona isis ... inongova distro inoshanda zvakanyanya muUX neUI iyo yandinofunga iripo mulinux, pasina kupokana yekutanga iri kuita basa rakakura, zvinondishungurudza ndisina nguva yekupa asi panguva ino ndinoronga kuti ndipe madhora gumi panopera isis ...
Ndine Acer Aspire One, ndeipi distro yaunokurudzira?
Ini ndaive naLubuntu uye zvaive zvine hunyanzvi kusvika padiki padiki zvakanditorera nguva kurongedza zvese, handizive kuti nei.
Ini ndinofunga Lubuntu isarudzo yakanaka. Unogona zvakare kuedza zvimwe zvichibva paOverbox, seCrunchbang (yakavakirwa paDebian) kana kuenda kudivi rerima uye edza Arch (kunyangwe iri yevashandisi vemberi).
Kupotsa zvakanakisa, Point Linux neMATE desktop, yakavakirwa paDebian 7 yakagadzikana. 🙂
Zvinonakidza… ndanga ndisingamuzive. Ndiri kuenda kuzvitarisa.
Kutenda nekukurudzira kwako, Point Linux Ndiri kuiyedza pane yangu Dell mini, uye inoshanda siriki, zvirinani kupfuura Ubuntu, asi uku ndiko kubata pachiratidziro kuitira kana iwe uchiziva nezve chero budiriro yeizvi, uye ruzha mumatauri inokundikana ini, uye inocheka asi pandinoisa mahedhifoni hapana dambudziko… Izvo zvakafanana muUbuntu 12 asi kubvira pandakaitenga ndakabvisa W7 makore matatu apfuura (ndinoshandisa Linux kubvira 98 asi ini handisi nyanzvi… ngatitii »zvakajairika »Mushandisi)
Mune ruzivo rwangu, makore apfuura vakatipa akawanda Asus EEE PC netbook, ane mwero kwazvo, Celeron 700Mhz, 512 DDR2 RAM, 4 GB SSD disk uye 7 ″ skrini. pfupi nyaya, sarudzo yakanakisa kare ikako yaive Debian neLXDE, takavagadzirisa zvakanaka ndokuvapa kuenda kuchikoro chekumaruwa. takaisa nharembozha ine wifi uye netiweki cabling. Isu takaisa michina mukamuri yemakomputa uye voila, zvese zvakabatana ne network ne HP laserjet printer. paive paine dambudziko rekutarisa mavhidhiyo eYouTube (kunyanya nekuda kweiyo EEA PC processor), saka takaisa pc ine simba zvishoma neprojekita uye voila. Makore mashanu apfuura uye makomputa achiri kushanda mushe, isu tinongoenda kakati wandei pagore kunatsiridza bhurawuza (Chromium) uye voila. Pa5GB yeSSD, pakanga paine zvishoma kupfuura 4GB yemahara yezvinhu zvakasiyana, nekuti mafaera akawiriraniswa mune yepakati server.
Mupfungwa iyoyo, kuita kwakasiyana-siyana kwaDebian sezvo mamwe ma distros angaida (uye chenjera, ndiri Susero / Redhatero pamoyo)
Ndatenda nekugovana ruzivo rwako.
Ini ndinotaura pamusoro, kuti ini ndaedza akati wandei madistros ane lxde xfce desktops, nezvimwe .. uye iyo yakandishamisa nekutsiga kwayo, kune vese vandakayedza ndiLUBUNTU .. Ndakaona zvisingaiti kuti distros ne desktop imwechete (xfce) yaizomhanya zvakasiyana.
Muchidimbu, kune chero munhu anoshandisa netbook kana makomputa ane mashoma zviwanikwa ini ndinokurudzira xfce, havazozvidemba.
Mhoro pansxo, mu:
Ini handinyatsovaziva asi zvinoita kwandiri kuti Lubuntu anoshandisa LXDE uye Xubuntu XFCE.
kumusoro! chiduku chidiki mumashoko angu haha ​​ichi illukki, lubuntu inoshandisa LXDE
Ndizvozvo, Lubuntu anomhanya LXDE. 🙂
Varume vakanaka, ini ndine Acer inoshuva AO250 netbook uye ini ndakaedza zvinotevera, Linux mint xfce; xubuntu 12.04, yekutanga os. Pasina kupokana yemaminiti matatu ane maziso akavharwa neiyo yekudyiwa kwe128mb pakutanga ndiyo kusvika zvino iyo isingakanganwike kundipa kudya, ikozvino nesarudzo idzi ini ndinorova bhagi uye ndichaedza bodhi, kwaziso Ariki
Mune yangu nyaya, ini ndakaisa Manjaro Xfce pane yemusikana wangu netbook. Ini ndakazvigadzirisa nemusoro weTrisquel nekuti wakaufarira zvirinani. Ichokwadi ndechekuti inotaridzika kugadzikana uye nyore kushandisa; iye pachake anoti akatanga kuda GNU / Linux. Dambudziko rega randinaro nderekuti makiyi ekupenya kwechidzitiro haashande (ndakaedza mhinduro dzechinyorwa pano asi hapana) zvakadaro hazvina kukosha.
Chimwe chinhu chakafanana chakaitika kwandiri nehanzvadzi yangu, ine samsung netbook .. zvinopa matambudziko nekuvhenekera, dambudziko nderekuti, kana iwe ukavhura laptop nebhatiri, inotenderera semwenje yekuponesa uye haugone kuiisa nemawoko, mhinduro chete kuibatidza zvakare nesimba rakabatana, wozoishandisa nebhatiri, nokudaro uchichengeta mwenje wakakwira.
Hector Zelaya akadaro
Ini ndinorohwa nekushomeka kweakarurama-vanobata ne KDE uye yayo plasma-netbook. Ini ndinoshandisa chakra uye chokwadi chinomhanya zvinoshamisa asi kunyanya iine 2GB ye RAM
Pindura Hector Zelaya
... mumaonero angu, ayo anobva pagirazi rema-10-inch, iyo plasma-netbook haina kuita kunge inodiwa. Mu desktop kana "Pc" modhi zvese zvinotaridzika zvakanaka.
Joli Cloud anga asati amiswa munguva pfupi yapfuura?!
Kwete izvo zvandinoziva. Iyo saiti ichiri kushanda uye haiti haina kubviswa.
Ndarangarira ndichiiverenga ...
Nhau dzinosuruvarisa, ini ndaisaziva.
En http://jolios.org/ haitauri chero chinhu nezvazvo kumiswa ... zvakanaka ... ini handizive.
Ini nehanzvadzi yangu tine mabhuku emambure, pasingasviki mwedzi wapfuura ndakaisa Lubuntu, nekuda kwekuti akaneta nemahwindo ekudzora muchina wako zvakanyanya, nguva pfupi yadarika akamufonera achindiudza kuti atojairira. OS uye kuti zvirongwa zvinovhura nekukurumidza uye ivo kazhinji vanozvibata zvakanaka.
Kune yangu chikamu, mazuva mashoma apfuura ini ndakaisa Debian + LXDE pane yangu netbook, uye inoshanda kwazvo: inokurumidza, inoshanda, inotarisira tembiricha uye mune zvese ndinoifarira. Ndisati ndaisa Manjaro + LXDE (yemunharaunda vhezheni) asi haina kushanda nemazvo, mbeva yakatemwa nguva dzese, yakapisa uye kazhinji shanduko haina kukodzera ini, zvinodaro nekuti ndatojaira Debian neyangu desktop PC Chero zvazvingaitika, ini ndichapa Manjaro mumwe mukana zvakare asi paPC, uye ino nguva neiyo yepamutemo vhezheni.
Lubuntu isarudzo yakanaka, asi zvinorwadza kuti yazvino vhezheni "13.10" ine dambudziko rakakura kwazvo neXscreensaver uye dambudziko nderekuti HAIUYEI uye iyo skrini inosviba mushure memaminetsi matatu, uye kunyangwe iwe ukaisa iyo inofara Xscreensaver, haina kushandisa shanduko
Ndakaziva kuti ndaishaya zvimwe ... 🙂
Slitaz isarudzo yakanaka kwazvo ...
Kupinda kwakanaka kwazvo.
Hei, ndine hurombo asi chinongedzo cheGoogle Chrome OS hachisi icho chakakodzera, chinongedzo cheCr Os, ivo havana kufanana.
Kune zvakawanda zvandanga ndisingazive, kunyanya Bodhi Linux, hazvimbokuvadza kuzviedza
asi pabhuku rangu rekuverenga ndinofarira lubuntu, ndiyo inomukodzera zvakanyanya 😛
Bhuku rangu remambure rakauya neSUSE Linux 11 pakutanga, iri Compaq Mini CQ10-811LA, zvakandibhadharisa soles mazana maviri makore apfuura, mushure mechinguva ndaida kuchinja, ndakanga ndisina zano rekugadzira mabhakiti kana chero chinhu uye saka ndakatanga pachangu, kana ndikaita basa risingabviri nekuti ndaitadza kubhuroka kubva kuUSB, mushure mechinguva ndakazowana hunyengeri, mushure mekunge UnetBooting iremerwa, ndaifanira kubaya chero kiyi uye ipapo chete ndipo pandakatanga bhuti, kuisa EasyPeasy sezvo yaive yega imwe yakaboora (pakutanga ndakafunga kuti chaive chishamiso, asi ipapo ini ndakawana hunyengeri uye ndanga ndichiedza mamwe ma distros), asi wifi yangu haina kundiziva uye ndaifanira kushandisa tambo.
Ini ndakaneta ndikaisa OpenSuse 12.2 KDE, yaive yepakati, asi handina kunzwa kugadzikana.
Ndakawana Fuduntu uye… zvakanaka ndanga ndiri murudo, zvese zvaive zvichishanda nemazvo, kunyangwe bhatiri rakagara kwenguva yakareba, trackpack yakashanda chaizvo uye chaiyo, iyo LibreOffice yakaunza masisitimu ane hushamwari asi chirongwa chakapedzwa uye pandisina kuwana chero distro kune yangu kufarira (Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint, Puppy, OpenSuse) Ndafunga kuisa Win7, uye ndiri pano.
Nguva pfupi yapfuura ndinoronga kuisa Lubuntu pane rangu bhuku rebhuku muchikamu uye kuramba ndichiedza vamwe kudzamara ndawana iyo inondipa iwo manzwiro andakapihwa naFuduntu
Pindura kuna Ocelan
Mberi! Iwe unofanirwa kuramba uchiedza ... 🙂
Zvakanaka ... ini ndinoshandisa yakawanda iyi netbook kubva kwandiri kunyora. Intel Atom 64 bits - 1,6 Ghz uye 2 Gb gondohwe. Ini ndaigara ndiine debian, uye kunyangwe ndaiziva kuti yanga isina kunaka pakutanga, ndakasarudza kuisa KADE mu Wheezy -kernel 3.2 uye kde 4.8-. ndikafamba. Dolphin inotora 3 kana 4 masekondi kubva pawakaimisikidza? hongu ... uye zvobva zvayenda mushe. Icewesel yatotora zvimwe ... anenge masekondi gumi ... asi kubvira vhezheni 10 kurodha pawebhu kwakanyanya. Inotaridza kuti inokurumidza kupfuura izvo zvinogona kubvumidzwa processor yangu. Ini ndinoshandisa java uye clementine, uye zvese zvakavhurwa muKADE uye hazvipfuure 27 ram .. zvakare ne libreoffice, ini ndakanganwa.
Iwe ikozvino une debian sid -kernel 3.12 uye kde 4.11- uye zvese zvakatora (izvo zvisina kureba) zvakatemwa muzviitiko zvakawanda nehafu.
Tsika: rakareruka desktop (lxde, kana kana iwe uchingoda openbox) haisi kuzodzivirira maficha senge mabhurawuza, offimatics, anoshandisa Java kana dhizaini inomhanya nekukurumidza.
Naizvozvo, kana iwe uine 2 Gb yegondohwe, unogona kuisa nyore nyore mu kde kana gnome pasina matambudziko makuru (kunyangwe zvichiratidzika kwandiri kunge gnome inodya yakawanda, ini handirangarire kuti nei ndakaiyedza zvishoma).
Ndicho chiitiko changu uye ichokwadi. Ko kana paine Nice kernel mu arch yakarongedzerwa netbook iyo yandakaona mu deb asi makumi matatu nemaviri. Izvi kana zvaigona kubatsira mashandiro mune zvese, kwete panzvimbo distro uye desktop yako.
Ini ndakakanganwa kutaura pane chimwe chakakosha chokwadi. Iyo tembiricha inodarika makumi mana C uye isingasviki makumi mashanu C pasi pemamiriro ese Bhatiri mushure megore rinoramba richinditorera anopfuura maawa matatu sezvarakaita pakutanga. Hapana dambudziko pazvinhu izvozvo. Iwo manejimendi anotaridzika kunge akanaka kwazvo !!
Ndakaona nyaya yacho ichinakidza zvikuru. Mazhinji ekugovera kwandanga ndisingazive kunze kweManjaro uye ChromOS. Ndichavaedza semachina chaiwo kuti vaone zvavanoratidzika kwandiri.
Zvakanaka! Iyo ndiyo yaive pfungwa. Vakurudzire ivo kuti vaedze matsva distros. 🙂
Ini yemabhuku kana cruchbang kana Archbang zvese zvinoita sedzakanaka sarudzo, kwekuravira kwangu kunouya kwakatakura kwazvo nemapakeji
Pindura kune fluff
Kwandiri, Archbang anosanganisa akanakisa epasirese nyika. Iyi sarudzo huru. Ndingangoda kushinga kutaura kuti imwe yeakanakisa (akareruka) distros.
Ini ndakaisa linux mint pane yangu HP G42 pamakumbo nekuti ndaifunga kuti chakareruka ...
Chii chaunofunga kuti chakanaka? kana iwe unokurudzira chero imwe yeaya ari mune ino positi kana ndeipi?
zvandiri kutsvaga mashandiro, iwe unoziva, kumhanya nezvimwe ...
elementaryOS pane netbook inoshanda chaizvo, hongu, iine mitezo yakaremara, mimvuri uye zvese izvo, asi ichiri yakanaka ... chokwadi ndechekuti, haina (hapana kukanganisa) kunge miniMac asi inoshandisika
Pamwe imhaka yekuti inenge yakanyorwa muVala, asi ini ndinoikurudzira zvakanyanya.
Pindura kuna edgar.kchaz
Ini ndakakanganwa, kuyedza Android yePc uye Chrome OS, ndiri kuda kuziva ...
Inonakidza! Ndatenda nekusiya komendi yako.
elementaryOS yakafanana nesirika, zvese zvinoshanda kwazvo.
Kutenda kuunganidzwa, sezvo yangu hp mini hard drive yakapisa, ndiri kuyedza distros, mazhinji acho anokundikana neiyo Wi-Fi kubatana, ini ndinovashandisa nekutora kubva pendrive, ndinoda kutaura kuti kana ndikavaisa yaive wifislax inoshanda 100% newifi asi haina hofisi yakavhurika kana hofisi yemahara, ini handinzwisise zvakawanda nezve kushingirira asi handina kukwanisa kuchengetedza shanduko dzandinoita mukuomerera kana kumagumo ikabvunza, unoda here shanduko kuve unowanikwa muzvikamu zvenguva yemberi? kushanda pa internet kwakanaka.
Ini ndichaedza ese akanyorwa pano, kwaziso, enda kumberi nekutenda neruzivo.
Pindura kuna yan
Wilson Cortegana akadaro
Mhoroi, ndinovimba vanondipindura haha, zvakanaka ndine samsung N102SP netbook, ndakaisa ubuntu 13.10 mazuva mashoma apfuura uye chokwadi ndechekuti ndakanyadziswa nekuita (kwakanyanya kunonoka, kupfuura pandakanga ndiine windows7), izvozvi vachindiudza nezve ma distros aya, ndinoda kuziva kuti ndezvipi zvakakodzera.
Pindura kuna Wilson Cortegana
Ini ndinokurudzira linuxmint 16 ine xfce desktop. Iyo yakazara yakazara distro neayo akareruka uye mazhinji emvura desktops. Chokwadi iyi distro haina kukuodza moyo. Luck!
Ini zvakare ndine iyo netbook, ini ndakaisa CrunchBang 11 uye haina kukuziva iwe (kana pane dambudziko) pane network kadhi, ipapo ini ndakaisa Lubuntu asi ndaifanira kurodhairi madhiraivha. Iye zvino ndasarudza Elementary OS, ndatova nezvazvinoita.
Mhoroi, ini ndiri mutsva kutenderedza pano ndanga ndichiverenga iyo posvo uye mamwe makomendi, ndinoda kuti iwe urayire distro yeti netbook rangu. Iyo Packard Bell dot se2, ine Intel atom n570 processor, 1gb DDR3 RAM, Windows 7 ... Ndinovimba unondibatsira nekuti ndine dambudziko pandinosarudza rakakodzera kwazvo, dambudziko nebhuku rangu remambure rinononoka kuvhura zvirongwa uye mapeji ewebhu uye kugara uchinamatira.
Ini ndinokurudzira linuxmint 16 x86 ine xfce desktop. Kwayedzwa pane netbook ine zvakafanana maficha.
Ipa chekutangaOS kuyedza uye kutsiva Midori neChromium. Kubhururuka!
Mupiro wakanaka kwazvo, ndichaedza Lubuntu pane ino 1GB RAM notibhuku.
Psdt: Unogona kuwedzera Damn Diki Linux, distro ye50 MB chete; maererano!
Ndeipi distro yaunokurudzira Toshiba NB50 ine 2GB (yakawedzerwa) neane makore-mana-ekupedzisira petadisimo processor?
Kana iri chrome OS, ndinoibhura sei?
nap, iwe unofunga kuti Point Linux ichafamba zvakanaka pabhuku rangu renhoroondo (Toshiba NB250) ine Intel Atom processor ine makore mana uye iri petadisimo?
Salamdreate uye salamandreo parutivi iyo salamander is salamander uye ini ndinokurudzira salamandri 92.4 kuti salamander is salamander you the salamander
Mazuva mashoma apfuura ndanga ndichidzidza zvese zvine chekuita neLinux, semushandisi weWindows ndainzwa kusava nehanya nazvo asi ndinofanira kutaura kuti ndine shungu kwazvo uye ndoda kutanga kushandisa uye kunyanya kuongorora zvakasikwa zveFree Software kune iyo huru huwandu hwemikana iyo iyo yainopa, uye kunyanya kune hunhu hwevanhu hweiyi pfungwa yekugovana ruzivo rwekunakira kwevanhu vese, nekutenda nemupiro, kwaziso
Mhoro, chii chaunokurudzira kune 1gb ram netbook uye 1.6GHz mono core processor? Ini ndanga ndichifunga nezve ELementary OS.
Elementary Os… inoshamisa distro… yakanyanya kushomeka uye inoyevedza Asi zvinosuruvarisa kune yako Hardware ini handioni seyakanakisa sarudzo nekuti iri desktop iri zvishoma inoda kupfuura vamwe vakaita lxde kana xfce. Kana iwe usina hanya zvakanyanya nezve chimiro, ini ndinokurudzira iwe lubuntu ne lxde desktop, yakapusa pane yandakaedza kusvika parizvino .. Unyoro hwakanyanya hwemachina ane diki Hardware kana sechipiri sarudzo asi tad inodzvinyirira kupfuura yekutanga linuxmint ne xfce desktop mune yangu maonero inokwezva kupfuura lxde asi ini ndinodzokorora tad inodzvinyirira zvinodikanwa. Ndinovimba une rombo rakanaka uye tiudze kuti sei.
Jose J Gascon akadaro
Ndakaedza akawanda ekuparadzira linux paNetbook kubva kuMint, kuburikidza neDebian, Android, nezvimwe. Ini ndaive nedambudziko nekupenya kwedesktop, kudzamara ndaedza Linux Ultimate Edition 3.8 http://ultimateedition.info/, inoshanda nekukurumidza uye kana iwe usingade iyo Mate desktop, nekuita mune terminal sudo apt-tora kuisa gnome, gadza iyo gnome desktop, ine gnome kudonha uye gnome kudonhedza ndege isina manomano, uye gnome 3, uye chimwe chinhu senge kubatana kana kubatana mukuwedzera kune Xbmc iyo inouya seyakajairika kunyorera uye inoita kuti ive nyore kwazvo kushandisa, kana chauri kuda iXbmc yenzvimbo yekuvaraidza pamba, neiyi iwe une ma2 nyika, kana iwe ukabhowekana ne xbmc unogona kushandisa zvese simba rekomputa nekugadzirisa iyo kune zvaunoda, inogadziriswa zvisingaite.
Ndiri kuimhanyisa paGateway LT4002m netbook, ndakakanganisa ndikaisa yekupedzisira edition 3.8 amd64, iyo netbook iri makumi matatu nematatu uye inoshanda zvakakwana,
Pindura kuna Jose J Gascon
Celso mazariegos akadaro
Parizvino pane yangu laptop ndinoshandisa Xubunto 10.2.
Nemazano ako ndiri kuenda kuisa LUBUNTU-14.04. Ndiri kuzoona kuti zvinofamba sei.
Kwaziso kubva kuGuatemala.
Pindura kuna Celso Mazariegos
Ini ndinoshandisa Linux Mint 17 Mate uye inoshanda zvakanyanya mushe.
Ini ndaizoedza Chrome OS, asi sezvo ichingoshanda chete kufamba uye hapana chimwe chinhu, ndisingakwanise kuisa mapakeji nezvinhu zvakadaro ...
Pindura kuna erretrogamer
usina chaunopomerwa akadaro
Mhoro munhu wese, ndiri kuvandudza kugovera kunonzi Xanadu Linux kwemakomputa ane mashoma zviwanikwa zvinoenderana neDebian SID, iri mubeta, kana chero mumwe wenyu achida kuyedza uye kupa maonero enyu, ichagamuchirwa zvakanaka, heino kero kubva kupi inogona kutorwa pasi: https://xanadulinux.wordpress.com/
zvakanaka. Ndichazviedza. ndatenda!
Dennis L. akadaro
Kana ivo vakaita kugovera kusingatsve laptop zvakanyanya, saka ndiko kuchave kugovera kwangu Haha
Pindura Dennis L.
Zvakanaka, ini ndine imwe HP yekare, iyo hp elitebook 6930p, yakanaka kwazvo uye inomhanya chaizvo neWindows, nekuti kana uchiedza pamwe nekuparadzirwa kwakasiyana kweLinux, kungava Fedora, Linux Mint, Ubuntu, Xubuntu, Kali, Elementary, Debian, uye zvese zvine mhedzisiro imwe chete, iyo laptop inopisa zvakanyanya ... Zvinoshamisa nekuti neWindows izvi hazvina kuitika, uye hazviitike sezvo ini ndakaiswa pachikamu. Chero ani anoziva chero kugoverwa kusingaite izvi ?? Ini ndatoneta nekuyedza uye zvakafanana nezvakagoverwa zvese… Chero rubatsiro ??
Uye chii chakaitika kune lxle iri nani kwazvo kupfuura lubuntu nevamwe, kuongororwa kweLXLE kungave kwakanaka http://lxle.net/
Pindura kuna Rob
Zvinonakidza, parizvino handina "komputa", benzi chete 1.66 GHz netbook uye 1 GB yeDDR2 RAM, maererano nekushandisa zviwanikwa, mutsauko wakadii ungavapo pakati pe "pure" arch linux, manjaro uye crunchbang ?
Hapana anotaura nezve Elive ???
Pindura kune roky
crunchbang pasina kupokana akanakisa ezvakanakisa….
Ini ndinobvuma, muchinda.
Chaizvoizvo chakanakisa, ndakachiisa uye ndokuchikopa kuUSB, kuti ndikwanise kuboora maPC akati wandei, ndinoshandisa pane iyo Thinkpad T43.
Kwazisai, ndine mintosx, iri linux mum m lap pa 64 zvishoma uye iri nani kukunda win 7 uye ndinoshamiswa nekumhanya kwayo, painovhura akawanda windows, uye deepin 2014.1 uye zvakare yakanaka.
Ndokumbirawo kuti murumbidze yandinofanira kushandisa. Ndiri kutsvaga linux distro
iyo haina dambudziko rekupenya, uye izvo zvinonditendera kuti ndigadzirise kupenya
nyore, kunyanya kumakomputa ane asingasviki 400 ndangariro
Mhoro husiku hwakanaka, ndagara ndichirohwa neyakareruka software yemashini-akatsanangura michina, uye paive nenguva pandakabheja Ubuntu ne "cacharrie" chimwe chinhu chandisingakwanise kuita izvozvi, uye chokwadi chakandiparadzanisa neLinux nekuti Izvo, ini handina basa nekuisa imwe yeiyi pairi nekutya kunamatira kugadzirisa madiki matambudziko.
zvirinani zvatogadziriswa ..
Lionofsnow Aterrazombies akadaro
Mhoroi, ndatenda neruzivo. Ndine iyo Eighth Window uye Zorin 9. Uyezve dhawunirodha OS isinganzwisisike, inonzi ReactOs ... zvinosuwisa kuti "live cd" yakambogara kwechinguva ichiita chimwe chinhu neiyo Hardware uye ini handina kukwanisa kuiisa (zvakanaka, ndini). Mumwe munhu anogona kundifadza pane iyi OS, ndinokutendai.
Pindura kuLionofsnow Aterrazombies
Mamwe ruzivo pa:
Chiitiko changu neruoko rwechipiri Acer Aspire One D257 (Intel Atom processor, 2 Gb Ram uye 500 Gb hard disk), yaive yekuti pakuyedza Fedora 21 ne Live Live haina kuziva keyboard; saka ndakaedza neUbuntu 14.10 uye pakanga pasina matambudziko mukucherechedzwa kwekhibhodi kana Wifi, isu taifanira chete kuwedzera rutsigiro rweSpanish. Ndakurudzirwa neichi posvo, ndakabvisa Ubuntu uye ndakaisa Lubuntu 14.10, iyo mukuwedzera kwekuziva iyo Wifi, keyboard (rutsigiro rwaifanira kuiswa nenzira yakapusa), pinda nekukurumidza uye nenzira kwayo uone mavhidhiyo eYouTube. For the moment zvinhu zvese zvanaka.
Kutenda nezvako zvinyorwa uye makomendi, anobatsira kwazvo.
Mhoroi, ini ndoda kuziva kuti ndeipi yakanyanya kunaka sisitimu yekushandisa yemuchina uyu
inteel gma3600 ratidza mutyairi
Intel® Atom TM CPU N2600 @ 1.60GHz × 4
inotsigira x64 uye x86
zvinoenderana nelinux graphic driver yainoshandisa ndeye PowerVR SGX545
fedora x64 ndiyo yega yakandipa iyo gnome3 nharaunda yakanaka kwazvo x ichokwadi
Ndinoda anofamba-famba nemuchina uyu nekuti nyaya yemifananidzo inondishungurudza zvakanyanya
Pindura ku facu
Chinyorwa ichi chakanyanya kunaka, ndinobva kuWindows uye ndiri kutora nhanho dzangu dzekutanga mukati meUbuntu, munyika yeLinux, kusvika parizvino zvakanaka, matambudziko andakakwanisa kugadzirisa ndichingotsvaga ruzivo, kunyanya mu desdelinux, iyo nguva ivo vanotora vanoongwa.
Pindura kuna Gilgamesh
Unogamuchirwa! Kumbundirana! Paul.
Ini ndashandisa crunchbang kwemakore maviri pa hp mini 2 ine 110gb da ram uye yaive yakanakisa nekukurumidza, yakagadzikana muchidimbu, dombo!
asi zvimwe zvirongwa zvaive zvekare zvechinyakare uye zvimwe zvaitadza kumisikidza nekuda kweiyo nyowani ...
Zvisinei, ndakadzokera kumahwindo 7 pamushini iwoyo kungoita bluetooth, asi basa randaifanirwa kuita ipapo rakatopera, saka ndiri kuona kugoverwa kuri kukurumidza seCB kana kunyangwe uye izvo zvinonditendera kuva nemapurogiramu achangopfuura ...
Kunyangwe zvichinzi netbook ndeye kungotarisa tsamba kana kuisa chat, ndinofunga pane kukanganisa nekuti panguva yandinoishandisa muCB muchina mudiki uyu wakaita zvese (sekubvumirwa kwaitwa processor) yaive multimedia centre, sosi yemari, yangu fapmachine… zvese!
asi sezvandataura CB yakati rebei uye ndiri kutsvaga chimwe chinhu chakafanana asi chazvino….
Pindura kuna guman
Kuti ini ndinozadzisa chinyorwa, ine ruzivo pane ese mashandiro masystem. Pachezvangu, sezvo Notebooks ane madiki RAM, Ubuntu anoshanda zvakakwana. Iyo ine inoshamwaridzika interface uye iri nyore kushandisa. Kusiyana nemamwe masisitimu anoshanda, ndeye mahara nezvose zvayo zvemhando yepamusoro.
Shamwari, ndine Dell Inspiron Mini 10V uye mairi, ndine xPud yakaiswa, uye ndiri "kufinha" sezvo iri "yakanaka" asi "yenguva pfupi" system, hapana shanduko dzinoiswa uye zvinoshandiswa hazvigone kuiswa uye yakatomiswa, iyo yaunokurudzira yangu Dell Inspiron Mini 10V netbook. Zvido!
zano: zano 2, imwe, yakanakisa zvinoenderana newe zvinoenderana nehunhu hwetsamba uye 2, imwe inochinja kana iyo inogona kuisa software kana mapakeji, kwandinogona kugadzirisa webs, html, php, nezvimwe uye imwe yemufananidzo mupepeti iri izvo zvandinotarisira zvakanyanya, mu xPud ndakakwanisa kuisa mupepeti wemufananidzo wakafanana chaizvo nePhotohop. Zvido!
Ndakaedza madhiri akati wandei ataurwa pano uye akanaka, ndinofanira kuyedza JoliOS nekuti zvinondiita ndinakidze, zvisinei, rega ndikuudze kuti izvozvi uye ndinogara ndichishandisa openuse, uye zvakare yakasarudzika
Ini ndinoshandisa chromebook, uye inounza chrome os, zvakanaka, ibhurawuza rinokurumidza uye kuti, hapana kana chero maapplication ekunze uye zvinondinetsa. 🙁 sekuuya kwazvinoita nekutadza, ndinotya kushandura OS yeimwe, izvo hazvizotanga futi uye panenge pasina dzidziso dzekuti ungachinje kana kugadzirisa sei Hardware iyi.
Ndinokurudzira kuti uedze kana uchizove nayo pakombuta, semuenzaniso mukicheni, kana muchimbuzi, kana padyo neTV mumba yekutandarira. Chero bedzi paine wifi, inoshanda kune zvese.
Ndine acer aspire 3756z laptop, 15.6 screen, 4GB ye RAM, Intel Pentiun dual core T4200 2.30 Gz processor, 300 GB hard drive.
inovhura XD ini ndinogara ndichikurudzira ini ndine makore ekushandisa, ini ndakaedzawo Ubunku, Kubuntu, Fedora, mmm akati wandei asi ini ndinoifarira iyo kazhinji ndinokukurudzira neGNOME desktop asi ini ndinoshandisa KDE nekuti inogara ichikurumidza pamushini
Ndokumbirawo, zviri zvechimbichimbi, mumwe munhu angandiudze kuti ndeapi eese anoshanda masisitimu echinyakare mapurogiramu anogona kuiswa sema windows !!!!!!!!!!
munhu wese. Iwe unongofanirwa kugadzira partition ye windows uye imwe yakawedzerwa kune yako linux distro, Ubuntu ndiyo yakapusa maererano nehuviri bhuti
Chinoitika kwandiri ndechekuti nguva dzandakaedza linux ndakave nadzo dzakakwana mumaawa maviri, handikwanise kutaura kuti ndakaedza akawanda distros (ubuntu uye fedora) asi chimwe chinhu chinondipengesa ndechekuti pane zvese zvandanga ndichida kuisa iwe unofanirwa kutora chimwe chinhu kutanga, kana kuisa mirairo. Chinhu chemahwindo chandisati ndambowana mune imwe OS ndiko kusununguka kwekuisa chirongwa.
Ndine acer inoshuva ne2gh uye 2gb yegondohwe, 32gb eMMC. Iine windows inoshanda yakadzikama asi dzimwe nguva ine yayo chaiyo hits mu internet browser. Ini handina chichemo chakakosha asi ndinoda kusarudzira linux iyo inopa yangu pc kubata kwakasiyana kunze kwemawindo emahwindo.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti komputa inotungamirwa kuyunivhesiti.
Kana mumwe munhu akafambira mberi achigona kundipa zano rekuti rishande rinoenderana neangu mashoma ndaizotenda, kana zvisiri, ndichaenderera ne win8.1
Pindura ku vvjvg
Zvakanaka, ndinokurudzira kuti ugare neWindows yako uye ndinokuudza neruremekedzo rwakafanira, hapana chekukuparidzira, kana dhimoni reMicrosoft. Kutaurisa kwako kunoratidza kuti hauna kukodzera mashandiro eLinux. Uye iyo yakazara ndeiyi: Unogona kuida kana iwe kuivenga. Kana iwe uchida icho, iwe uchatsvaga maitiro ekuziva kuti anoshanda sei uye iwe unozotora pamatambudziko ekudzidza zvese kana zvisiri ... hazvisi zvako. Ndanga ndichishandisa Linux kubva 1998 padesktop yangu chete. Ndine mini Dell inoshandisa Windows (uye iye anoshandisa mahara software) Windows Runhare uye Android uye ini handina dambudziko kushandisa yega yega maererano nezvandinoda. Usazvitore nenzira isiriyo, iwe unofanirwa kungo gamuchira kuti kana uchizvida, iwe unozotsvaga maitiro ekuzviziva uye kuchinjira kune zvaunoda.
Pindura kuna JoseV.
shasha shamwari ndichaenda kuyedza zorin iwe lite kuti uone kuti zviri sei mu mini laptop yangu ndozokuudza
Edza Bodhi neshanduro nyowani runako pamichina ine zviwanikwa zvishoma, zvinorwadza
Edgar Ilasaca Aquima akadaro
Ini ndanga ndichiverenga makomendi ako, dambudziko rangu hombe kwandiri, kuti ndine HP pavilion dv1010la AMD Athlon, ine 2 GB, iko kushandiswa kwebhatiri reLaptop, iro rinogara kweinopfuura kweawa chete, ndiri kushandisa CUB Linux ikozvino ( Ubuntu ine Chrome OS chitarisiko), asi ini ndoda kuziva kuti kugovera kupi ndiko kunoshanda zvakanyanya mukushandisa bhatiri, uye kana zvichibvira, ndiudze kuti rudzi rwe processor runobata sei mashandiro e distro.
Kukwazisa kubva kuPeru
Pindura Edgar Ilasaca Aquima
Jose Vega akadaro
Ko zvakadii, nekuti nguva pfupi yadarika ndakaedza mavhezheni mazhinji ndakaaodhaunirodha, ndikaapisa kudzimara ndapera madiski hehe, ndobva ndaaisa muUSB kusvika ndawana akanakisa eiyo hp 1100 netbook ine atomu uye 1 gb ye gondohwe, Iwo aindishandira zvakanakisa aive Elementary (yekutanga-os-freya-32-bit-yakawanda-ubu), ubuntu netbook edition (ubuntu-netbook-edition-10.10) asi rutsigiro rwatomira saka ndakachinja zvakare, Kali (kali- linux-2016.2-i386) yakanaka kwazvo asi chokwadi chaisazoshandisa maturusi ayo ese pakupedzisira ndakagara naPepermint (Peppermint-7-20160616-i386) chero yeavo vandakaziva isina waya network kadhi uye yakashanda zvakanaka, dzimwe nguva iyo yekutanga yakadzikira zvishoma, asi kuita kwese kwakanaka pane chero distro.
Pindura kuna Jose Vega
Ndokumbira undiudze kuti ndeipi yakanakisa linux sarudzo ye dell i5 6gb ram 350 hd laptop
Mhoroi, ndine mubvunzo. Ini handisi wenguva dzose linux mushandisi, uye ini ndine yekare netbook (ingangoita makore gumi ekuberekwa) iyo yakamhanya pa XP, asi disk rakatsva. Iye zvino ini ndoda kuisa imwe OS kwariri kunyangwe kurishandisa kusefa mambure. (Kutaura chokwadi, murume wangu mukuru ane makore makumi manomwe nematatu ekuberekwa anozoishandisa uye achangoishandisa kumaemail, kuverenga mapepanhau uye kunyora gwaro risinganzwisisike.
Ndakaedza kuisa iyo Lubuntu yakakurudzirwa pano uye zvese zvakange zvakanaka kusvikira ndawana mhosho meseji yekuti kuiswa kweGrub bootloader kwakundikana.
Zvino, iyo OS yaive pakati payo uye ini handizive kuti ndoita sei kuti ishande ...
Zvino mubvunzo. Ko Lubuntu achamhanya pamushini wekare kudaro? Iwe unokurudzira chero imwe distro iri nyore uye ine hushamwari?
Heano maficha emambure: HP Mini 110-1020la Netbook, Intel Atom N270 processor (1.60 GHz), 1GB DDR2 Memory, 10.1 ″ WSVGA Screen, 160GB Hard Drive, 802.11b / g Network, Windows XP Kumba SP3.
Yakanaka kwazvo posvo! Ini ndichaedza zvimwe zvekuverenga ndobva ndazvibatanidza neavo vewebhusaiti ino: https://andro2id.com/mejores-distribuciones-linux-ligeras/
Jose Luis Gomez akadaro
Ini ndaneta nekuyedza linux distros, pane yeArgentina hurumende exo 355 netbook, ine 2g yegondohwe yandakawedzera x yakauya ne1g. uye iyo distro yakashanda zvakanakira solid solid, kugadzikana uye nekuti ine ese madhiraivha aive akanongedzera linux shamwari 3.2 pombi mune zvese inoshanda zvakatsiga uye inopedza neyemimhanzi inoridza uye firefox mu facebook zvizere, inosvika zvishoma mazana mashanu megabytes egondohwe , zvinoenderana necomputer Monitor, inoona wi-fi, uye zvese zvaunoisa, kwandiri mune iyi mhando yemuchina, yakanakisa distro inoenderana nedebian… ..
Pindura kuna jose luis gomez
Chikamu Chechipiri Debian Kwayedza + Mate + Zvirongwa
SuperTuxKart 0.8.1 yakasvika yakatakura nenhau